2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် Bitcoin ဝယ်ယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း - ကုန်သွယ်မှု2ခုကို လေ့လာပါ။
Debit Card ဖြင့် Bitcoin ၀ ယ်နည်း။ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန် ၂၀၂၁ ကိုလေ့လာပါ
Bitcoin ၏တည်ရှိမှုပထမနှစ်များအတွင်း၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာမှငွေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သင့်အား ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့် ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံခွင့်ပြုသည့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း နှစ်ခုရှိသော်လည်း အဆုံးမှအဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရက်သတ္တပတ်များစွာ ကြာတတ်သည်။
2022 သို့ အမြန်ရောက်ရှိပြီး ယခုအခါ ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် Bitcoin ကို ဝယ်ယူရန် အလွန်လွယ်ကူနေပြီဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ အချို့သော UK ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ပလပ်ဖောင်းများ အများအပြားရှိသည်။ FCA.
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာ Bitcoin ကိုနေ့စဉ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြင့်ဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲဆိုတာရဲ့အပြင်အဆင်တွေကိုရှင်းပြပါတယ်။ အရေးကြီးသည်မှာစည်းမျဉ်း၊ အခကြေးငွေနှင့်ထုတ်ယူခြင်းစသည့်ပွဲစား၊ လဲလှယ်ခြင်း (သို့) ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းအသစ်များကိုမသုံးမီသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။
မှတ်စု: ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အဖြေရှာသည့်အခါ၊ Bitcoin မဝယ်မီ သင်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပန်းတိုင်များ သည် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့ပွဲစားများသည် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း အခြားပွဲစားများသည် နေ့စဉ်ကုန်သည်များအတွက် ပို၍အဆင်ပြေပါသည်။
၅ မိနစ်အတွင်း Debit Card ဖြင့် Bitcoin ကိုဝယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ရန်အချိန်မရှိပါလား။ သို့ဆိုလျှင် Bitcoin ကိုယခုအချိန်တွင် ၀ ယ်ယူရန်အောက်ဖော်ပြပါအမြန်မီးအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။
➖ အဆင့် 1: ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ Bitcoin ပွဲစား - Crypto ဒုံးပျံ.
➖ အဆင့် 2: သင်၏ ID မိတ္တူကို အပ်လုဒ်တင်ခြင်းဖြင့် သင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုပါ။
➖ အဆင့် 3: ဒက်ဘစ်ကတ်အသေးစိတ်နှင့် အပ်ငွေပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
➖ အဆင့် 4: အဆိုပါကိုသွားပါ ကုန်သွယ် Bitcoin page နဲ့ order တင်ပါ။
➖ အဆင့် 5: သင်ရောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်အထိ သင်၏ Bitcoin ကို ပွဲစားတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
Bitcoin - Debit Card ဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် cryptocurrencies ၏ ထူးဆန်းပြီး အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာသို့ လူသစ်ဖြစ်ပါက၊ သင့်ငွေနှင့်မခွဲထုတ်မီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ် မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်းကို ခိုင်မာစွာနားလည်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် Bitcoin ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ပြင်ပကုမ္ပဏီပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အထူးကျွမ်းကျင်သူ cryptocurrency လဲလှယ်မှု သို့မဟုတ် တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ CFD ပွဲစား။
သင်ရွေးချယ်သော platform သည်သင်လုပ်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဥပမာ Bitcoin ကိုသင်ဝယ်လိုလျှင်အခြား cryptocurrencies ကဲ့သို့သင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည် Ethereum သို့မဟုတ် Ripple၊ ထို့နောက် cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်က Bitcoin ရာပေါင်းများစွာနဲ့အခြားဒင်္ဂါးပြားတွေကို Platform တစ်ခုတည်းနဲ့ကုန်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ။ သို့သော်၊ ဤပလက်ဖောင်းအများစုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်နည်းဖြင့်လည်ပတ်ကြသောကြောင့်သတိဖြင့်နင်းပါ။ အခြားအဆုံးတွင် Bitcoin ကိုခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းဖြင့် ၀ ယ်လိုသည်ဆိုပါကအွန်လိုင်းပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရုံသာမကဘဲ cryptocurrency ပွဲစား ထိန်းညှိထားသော်လည်းအခကြေးငွေများသည်အလွန်နိမ့်သည်။ ဒါ့အပြင် Bitcoin ကိုတိုစေနိုင်တဲ့ option လည်းရပါလိမ့်မယ် ဆင်း (သင်၏အကောင့်ထဲရှိထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း) သြဇာသက်ရောက်ခြင်း။
Bitcoin ကိုဝယ်ယူရန်အတွက် Debit Card အသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
သင့်အပ်ငွေကို သင့်အကောင့်ထဲသို့ ချက်ချင်းထည့်သွင်းပါ။
Visa၊ Visa Electron၊ MasterCard သို့မဟုတ် Maestro မှ ရွေးချယ်ပါ။
အချို့သောပလပ်ဖောင်းများသည် မည်သည့်ဒက်ဘစ်ကတ်တွင်မဆို အပ်ငွေအခကြေးငွေကို ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
ဒက်ဘစ်ကတ် လက်ခံသူများသည် လိုင်စင်ရှိရမည်။
ငွေထုတ်သည့်အခါ ငွေများကို သင်၏ဒက်ဘစ်ကတ်သို့ ပြန်ထုတ်ပါ။
သင့်ကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ထိပ်တန်းပွဲစားများက SSL ကုဒ်ဝှက်စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။
ရွေးချယ်ရန် စည်းမျဉ်းခံပွဲစား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ။
ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကန့်သတ်ချက်များ နည်းပါးပါသည်။
သင်၏အထောက်အထားကို ဦးစွာအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
AMEX ကို ထောက်ပံ့ခဲသည်။
Debit Card ဖြင့် Bitcoin ၀ ယ်ယူရန်အတွက်အခကြေးငွေများ
အွန်လိုင်းပွဲစားကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားမီ၊ သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ကုန်ကျစရိတ်အချို့ကိုလေ့လာကြပါစို့။ သတိပြုရမည်မှာတိကျသောအခကြေးငွေများသည်ပွဲစားမှပွဲစားနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီသေချာစစ်ဆေးပါ။
သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်ပထမအခကြေးငွေမှာဒက်ဘစ်ကဒ်ပြားအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်မတူဘဲသင်၏ငွေထုတ်ကဒ်ထုတ်ပေးသူသည် Bitcoin ကိုဝယ်ရန်ကဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင့်အားအားသွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အခြားငွေပေးငွေယူနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်အချို့သောတတိယပါတီပွဲစားများသည်သင်၏ငွေထုတ်ကဒ်အတွက်ငွေသွင်းခကိုကောက်ခံပါမည်။
ဤအရာ၏ အဓိက ဥပမာမှာ လူကြိုက်များသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Coinbase - ယခု UK ရုံးခန်းတစ်ခုရှိသည်။
ဒက်ဘစ်ကဒ်သုံးသည့်အခါပလက်ဖောင်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ် ၃.၉၉% ရှိသည်။
သို့ဖြစ်၍ Bitcoin ၏ပေါင် ၁၀၀၀ တန် ၀ ယ်ယူပါကသိုက်ကြေးအတွက်ပေါင် ၃၉.၉၉ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့အတူငွေဖြည့်ကတ်ကဒ်ကိုငွေသွင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့၊ ဒီစာမျက်နှာမှာအကြံပြုထားသည့်ပွဲစားများအားလုံးသည်ထိုအတိုင်းပြုလုပ်ကြသည်။
သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်နောက်အခကြေးငွေမှာပလက်ဖောင်းကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏အခကြေးငွေဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ သင်ဟာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ cryptocurrency ပွဲစားမှကောက်ခံတဲ့ကော်မရှင်ပါ။
၎င်းကိုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးသင်ကုန်သွယ်လိုသောပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤတစ်ကြိမ်သာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်ကုန်သွယ်မှု၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်အားကျသင့်လိမ့်မည် နှင့် ရောင်းရန်
Coinbase သည် ကုန်သွယ်မှုအခကြေးငွေ 1.5% ကို ကောက်ခံပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် £1,000 တန်သော Bitcoin ကိုဝယ်လိုပါက ကော်မရှင်ခ £15 ပေးရသည်။
၎င်းသည် သင့်အား £985 တန်သော Bitcoin ဖြင့် ထားခဲ့ပါမည်။
လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ သင်၏ Bitcoin သည် ယခုအခါ £1,500 တန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် သင်၏အမြတ်ငွေကို ငွေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကော်မရှင်၏ 1.5% တွင် သင်၏ £1,500 ရောင်းရန်အမိန့်တွင် £22.50 အခကြေးငွေဖြင့် ရလဒ်ထွက်သည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော Bitcoin ပွဲစားများသည်သင့်အားမည်သည့်ကော်မရှင်မဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲ cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းအစား၊ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအခကြေးငွေမှာပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်သည် - နောက်အခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
စတော့ရှယ်ယာနဲ့ အစုရှယ်ယာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ETFsသို့မဟုတ် အညွှန်းကိန်းများ – ပျံ့နှံ့မှုဟုခေါ်သော သွယ်ဝိုက်သောအခကြေးငွေကို သင်အမြဲပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ Bitcoin ဝယ်ယူခြင်းသည် ကွဲပြားခြင်းမရှိပါ။ သတိမထားမိသူများအတွက်၊ ပျံ့နှံ့မှုသည် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ 'ဝယ်' ဈေးနှုန်းနှင့် 'ရောင်း' စျေးနှုန်းကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ဝယ်ခြင်းကိစ္စတွင်၊ ပျံ့နှံ့ Layman ၏ စည်းကမ်းချက်များအရ၊ သင်သည် အရင်းကျေရန် ဖြန့်ကြက်မှုနှင့် ညီမျှသော အမြတ်များ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျံ့နှံ့မှု မြင့်မားလေ၊ ငွေရှာရန် ခက်ခဲလေဖြစ်သည်။
Bitcoin ၏ တကယ့်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးမှာ ပေါင် ၇၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ပွဲစားသည် 'ဝယ်' စျေးနှုန်း £6,860 ကမ်းလှမ်းသည်။
'ရောင်း' စျေးနှုန်းသည် £7,140 ဖြစ်သည်။
ဤပမာဏသည် 2% ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာ ပျံ့နှံ့မှုသည် 2% ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပွဲစားတစ် ဦး ထံမှ£ 2,000 တန်ကြေးရှိ£2၀ ယ်လိုပါက ၂% ပြန့်ပွားမှုကိုမျှတစေလျှင်၊ အမြတ်ကိုအနည်းဆုံး ၂% သာရရှိရန်လိုအပ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင် Bitcoin ကိုဝယ်ပြီးလျှင်ချက်ချင်းရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင် ၂% ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
သင်သည် Bitcoin ကဒ်ပြားဖြင့် ၀ ယ်လိုသည်ဆိုပါကနောင်တွင် ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိမည်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ တကယ်တော့ဒီဟာလူတွေကို Bitcoin မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပဲ။ ယေဘုယျသဘောတူညီချက်ကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဟာတန်ဖိုးရှိတုန်းပဲ အစိတ်အပိုင်း ၎င်း၏ရေရှည်အလားအလာ၏။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်သင်၏ Bitcoin ကိုလုံခြုံစွာထားရန်မည်သို့ရည်ရွယ်သည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာ Bitcoin ကိုဗဟို ဦး စီးချုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားမကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုမကြာခဏချန်လှပ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဒင်္ဂါးများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ဤသည်မှာ Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားထံမှ Bitcoin ကိုဝယ်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ထို့နောက် သင်၏ထူးခြားသောပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ (ပုံမှန်အားဖြင့် အယ်လ်ဖာဂဏန်း ၃၆ လုံး) ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပွဲစားထံမှ Bitcoin ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါ။
10 မိနစ်အကြာတွင် Bitcoin သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ရောက်ရှိလာသည်။
သင် ၎င်းကိုရောင်းလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်အထိ Bitcoin သည် သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ထို့နောက် သင်ဒင်္ဂါးပြားများကို ပွဲစားထံ ပြန်လွှဲပြီး ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာမှ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း သင်၏ Bitcoin ကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ဆုတ်ခွာခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ခက်ခဲရုံသာမက အချိန်ကုန်လည်း လွန်စွာ အချိန်ကုန်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အရေးကြီးဆုံးမှာ - သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဟက်ခ်ခံရပါက သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာမှားထည့်ခြင်းဖြင့် အမှားလုပ်မိပါက သင်၏ Bitcoin သည် ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Bitcoin ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းထားသည့်ပွဲစားများနှင့် ၀ ယ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်သင်၏ဒင်္ဂါးများကိုထုတ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သိုလှောင်မှုအတွက်လည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ထိုမျှမကသင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ထိုနေရာတွင်သင်နေထိုင်လိုသမျှကာလပတ်လုံးထိန်းညှိထားသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။
သင်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို Debit Card သို့ငွေသားထုတ်ခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ Bitcoin များကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်ပုဂ္ဂလိကပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုတွင်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်စဉ်သာမကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ပေးရန်အတွက်ကြီးမားသောအခက်အခဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးကိုပေးသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
သင် £1,000 တန်ကြေးရှိသော Bitcoin ကို စည်းမျဉ်းခံ ကော်မရှင်-အခမဲ့ CFD ပွဲစားထံမှ ဝယ်သည်။
Bitcoin သည် သင့်ပွဲစားအကောင့်တွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။
12 လကြာပြီးနောက်၊ Bitcoin သည် သင်ပေးဆောင်သည့်စျေးနှုန်းထက် 60% ပိုတန်ဖိုးရှိသောကြောင့် သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ငွေထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
'ရောင်း' မှာကြားခြင်းဖြင့်၊ သင်၏ Bitcoin သည် ကော်မရှင်အခမဲ့အခြေခံဖြင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာသုံးငွေကြေး (ပေါင်၊ ဒေါ်လာ၊ ယူရို စသည်ဖြင့်) သို့ ချက်ချင်းပြောင်းသွားပါသည်။
ထို့နောက် သင်သည် သင်၏ဒက်ဘစ်ကတ်သို့ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် တောင်းဆိုသည်။
ရန်ပုံငွေများသည် 1-3 အလုပ်လုပ်ရက်အကြာတွင် သင့်ဒက်ဘစ်ကတ်တွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုမှာသင်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြင့် Bitcoin ၀ ယ်ရန်ပွဲစားရွေးခြင်း
ဒီတော့အခုသင်ဟာ Bitcoin ကဒ်ပြားနဲ့ ၀ ယ်ဖို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာရဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်ကိုသိပြီဆိုရင်၊ ငါတို့ကအွန်လိုင်းပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးမယ်။ ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့မရပါဘူး။ အခုဆိုရင် Bitcoin ပွဲစားများစွာကသင့်ကိုအမှန်တကယ်ငွေကြေးဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
မှတ်စု: DIY အခြေခံဖြင့် Bitcoin ပွဲစားတစ်ဦးကို သုတေသနလုပ်ရန် အချိန်မရှိပါက၊ ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော ပလပ်ဖောင်းငါးခုကို စစ်ဆေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။.
အများကြီးနဲ့ Bitcoin စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမဲ့သည့်ပုံစံဖြင့် လည်ပတ်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ပွဲစားသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင်ပါဝင်သည့်ကိစ္စတွင် သင့်ထံလှည့်ရန်နေရာမရှိပေ။
ထို့ကြောင့် သင်သည် စည်းကမ်းချက်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် ပွဲစားကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည်။ အမှုအခင်းအများစုတွင်၊ ၎င်းသည် FCA (UK) ကဲ့သို့ အဆင့်တစ်လိုင်စင်အဖွဲ့ဖြင့် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ASIC (သြစတေးလျ) သို့မဟုတ် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်)။
တကယ်တော့ဒီစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပွဲစားတချို့ဟာလိုင်စင်ကိုင်ထားကြတယ် မျိုးစုံ စည်းမျဉ်းအလောင်းတွေ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Visa ကိုလက်ခံသောအွန်လိုင်းပွဲစားများကိုတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း MasterCard မဟုတ်ပါ။
Maestro မှထုတ်ပေးသောကတ် သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနေပါက ဤအဆင့်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ AMEXVisa သို့မဟုတ် MasterCard နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပံ့ပိုးမှုသည် နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အပ်ငွေကြေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ပွဲစားသည်ပြန့်ပွားရေးဌာန၌မည်မျှယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ရေတိုကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုင်စင်တစ်ခု ကိုင်ဆောင်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုများသည် အဆုံးအစမရှိဟု မဆိုလိုပါ။ သင်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကောင့်သည် အချိန်တိုင်း လုံခြုံနေစေရန် သေချာစေလိုသောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်းအဆင့်လုံခြုံရေးကို အသုံးချသည့် cryptocurrency ပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် two-factor authentication ၏အကြိုက်များ ပါ၀င်သည် - သင့်အကောင့်သို့ သင်ဝင်ရောက်တိုင်း သင့်ဖုန်းသို့ ပေးပို့သည့် သီးသန့်ကုဒ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း SSL စာဝှက်ရန်မျှော်လင့်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမှားယွင်းစွာကိုင်တွယ်မိခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေသည်။
သင်အများစုသည် သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရေရှည်တွင်ထိန်းထားနိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် Bitcoin ကိုဝယ်ရန်ရှာဖွေနေသော်လည်း၊ သင်အချို့သည် ရေတိုဂိမ်းကို ကြည့်ရှုနေပေမည်။
သို့ဆိုလျှင်သင်၏အရောင်းအဝယ်များသို့သြဇာသက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ပွဲစားသည်၎င်းကိုမပံ့ပိုးသည်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ သင်ဟာဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟုမယူမှတ်လျှင်၊ cryptocurrencies တွင် 2: 1 ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
သြဇာကောင်းသည့်အနေဖြင့်သင်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ် Bitcoin ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်၎င်း၏စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်အပြီးတွင်သြဇာနှင့် / သို့မဟုတ်တိုတောင်းသောအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထိပ်တန်းအဆင့်အထောက်အပံ့ပေးသည့် Bitcoin ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ပွဲစားအချို့ကတယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့လိုင်းကိုပေးသော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း (သို့) အီးမေးလ်ပုံစံဖြင့်လာသည်။
ထို့အပြင်သုံးစွဲသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့များသည်မည်သည့်အချိန်နှင့်နေ့ရက်များကိုသေချာစစ်ဆေးပါစေ။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၄/၅ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ထောက်ပံ့မှုမရနိုင်ပါ။
Debit Card ဖြင့် Bitcoin ၀ ယ်နည်း
🥇အဆင့် ၁ - ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုထောက်ပံ့သောပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသုတေသနလုပ်ရန်အချိန်မရှိလျှင်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသော Bitcoin ပွဲစားငါး ဦး ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပွဲစားတိုင်းသည်နာမည်ကောင်းရကြသည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် နေရာလွတ်, ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကအမြဲတမ်းလုံခြုံတယ်။
သငျသညျစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပွဲစားကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်သကဲ့သို့, သင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူရုံသာမကအခြေခံကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုသာတောင်းဆိုသည်။
ထိုအခါသင်သည်သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောပွဲစားများသည်သင့်အားအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) ၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ္တူတစ်ခုကိုသာတင်ပြီးစနစ်ကချက်ချင်းအတည်ပြုသင့်သည်။
🥇အဆင့် ၃။ ငွေသွင်းရန်အတွက်သင်၏ Debit Card ကိုအသုံးပြုပါ
သင်၏ ID ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏ငွေထုတ်ကဒ်ပြားထဲ၌ငွေအချို့ကိုထည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစား၏ဘဏ်စာရင်းသို့သွားပြီးဒက်ဘစ်ကဒ်ရွေးပါ။
ထို့နောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နှင့် CVV နံပါတ်နှင့်သင်၏ကဒ်၏ရှေ့ဖက်ရှိနံပါတ် (၁၆) ခုကိုထည့်ပါ။ သင်၏ဒေသသုံးငွေကြေးဖြင့်ငွေသွင်းလိုသည့်ပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။
သင်၏အရစ်ကျအကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးသောအခါ Bitcoin ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဆိုက်၏ cryptocurrency အပိုင်းကိုကူးခေါင်းနှင့် Bitcoin ထွက်ကြည့်ရှုပါ။ သတိပြုရမည်မှာပွဲစားအများစုသည် Bitcoin ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင်ဝယ်လိုသော Bitcoin ပမာဏကိုထည့်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်၏အမှာစာကိုအတည်ပြုပါ။ သင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက - ဥပမာအားဖြင့်သြဇာသက်ရောက်ခြင်း (သို့) တိုတောင်းသောအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း - သင်၏အမှာစာအားအတည်ပြုခြင်းမပြုမီသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။
Debit Card ဖြင့် Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်ထိပ်တန်းပွဲစား ၅ ယောက်
သင်က Bitcoin ကဒ်ဖြင့် Bitcoin ကို ၀ ယ်လိုလျှင်၊ မည်သည့်ပွဲစားနှင့်မကိုက်ညီပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအကြံပြုချက် ၅ ခုကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
အခုပဲ ရှစ်ထုပ်ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း EuropeFX သည် အထူးကျွမ်းကျင်သူ Forex ပွဲစားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် ရှယ်ယာများ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများပုံစံဖြင့် CFDs များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင်သည် MT4 မှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် desktop software သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း/တက်ဘလက်အပလီကေးရှင်းမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ပုံမှန်ဝဘ်ဘရောက်ဆာမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုပါက၊ ပွဲစားသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည့် EuroTrader 2.0 ကို ပေးဆောင်သည်။ အခကြေးငွေအရ EuropeFX သည် အဓိကအတွဲများပေါ်တွင် အလွန်တင်းကျပ်စွာ ပျံ့နှံ့မှုကို ပေးပါသည်။ ပွဲစားကို CySEC မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီး လိုင်စင်ရထားသောကြောင့် သင့်ငွေသည် အချိန်တိုင်း ဘေးကင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအစမှအဆုံးဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် Bitcoin ကဒ်ပြားဖြင့် ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုသင်ယခုနားလည်လာပြီဖြစ်သည်။ ယခုသင်သိသည့်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး၊ ID အချို့တင်ပါ၊ သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်အချက်အလက်ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းသည် ၁၀ မိနစ်ထက်နည်းသောအချိန်၌ Bitcoin ကိုသင်ဝယ်ယူပြီးပါပြီ။
သို့သော်လုပ်ငန်းစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးပွဲစားကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကော်မရှင်များ၊ အပ်ငွေအခကြေးငွေများ၊
Bitcoin ကိုသင် ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ထိပ်တန်းပွဲစား ၅ ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့လမ်းတစ်လျှောက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်စာရင်းပေးသွင်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသောပလက်ဖောင်းများအားလုံးကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နက်ရှိုင်းသောသုတေသနပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲကိုသက်သာစေသည်။
ပွဲစားသည်ကဒ်ထုတ်ပေးသူကို (Visa, MasterCard စသည်) ပံ့ပိုးပေးသရွေ့ Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်ကြိုတင်ပေးချေထားသောငွေထုတ်ကဒ်ကို သုံး၍ ပြissuesနာမရှိပါ။ ငွေဖြည့်ကဒ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
သင်အသုံးပြုသည့်ပွဲစားအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပေါင် ၅၀ မှ ၁၀၀ အတွင်းအကွာတွင်ရှိပြီး၊ အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီစစ်ဆေးရန်သေချာပါသည်
ကဒ်ပြားကို အသုံးပြု၍ Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန် ID ကိုအဘယ်ကြောင့် upload လုပ်ရမည်နည်း။
၎င်းတို့၏လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ Bitcoin ပွဲစားများသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအား၎င်း၏ site သို့ sign up လုပ်ရန်အတည်ပြုရမည်။
Bitcoin ကိုဝယ်ယူရန်အတွက် debit card ကိုအသုံးပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အပ်ငွေကြေးပေးရန်လိုအပ်သနည်း။
သိုက်အခကြေးငွေကောက်ခံပါကများသောအားဖြင့်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းကျသည်။ ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့်ပွဲစားများသည်အမှီကဒ်ဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။
Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဘဏ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုသုံးခွင့်ပြုပါမည်လား။
Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ပေးရန်မသင့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသို့ငွေသွင်းရန်လိုအပ်ပါကသင်၏အမြတ်ကိုပြန်လည်တူညီသည့်ကဒ်သို့ပြန်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ငွေခဝါချခြင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုတန်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကန ဦး ကဒ်ကို Bitcoin တိုတောင်းလိုပါက CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ယူကေနေရာတွင်ရာနှင့်ချီသောတက်ကြွစွာပါဝင်သောကြောင့်ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။